तिथि मेरो पत्रु »5कुराहरू Girls एक ब्रेकअप पछि के
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सेप्टेम्बर. 24 2020 |2मिनेट पढ्न
गरेको यो सामना गरौं, भङ्ग-अप कठिन. कुनै कुरा यो सुरु गर्ने, पहिलो केही हप्ता कठिन हुन लाग्न. जबकि, अन्ततः, हामी सबै अन्य प्यार गर्दछ पाउन मा कदम, सबै बालिका तोडेर पछि के केही कुराहरू छन्. केही तल उल्लेख गरिएका छन्:
1. पुकार्छन् – धेरै
यो एक स्मृति मा सम्झना होस्, उपहार, गीत, वा भावनाहरू एक अनियमित उग्र रूप लिंदा, अनिवार्य हुनेछ रोइरहेको. चोट र भावना देखाउने पोस्ट ब्रेक-अप निको हुने प्रक्रिया मा पहिलो कदम हो गरिंदैछ.
2. फेसबुक उनको पूर्व भेट्नो
सामाजिक मिडिया को प्रसार संग, यो शायद बालिका एक तोडने-अप पछि के सबै भन्दा स्पष्ट र विनाशकारी कुराहरु. तैपनि संयुक्त राष्ट्र-friending पछि, बालिका मदत तर खोज पट्टी मा उनको पूर्व को नाम मा टाइप र लगातार उहाँलाई र सबै फोटो डंठल सक्दैन, पृष्ठ, र स्थिति उहाँले मन पर्यो वा टिप्पणी छ.
3. दाह्री काट्ने रुकती
यस मानिसहरूलाई क्रुद्ध हुनुको गुस्से मा नारीवाद समर्थन हुन्छ जबकि. यो पनि दिल तोड बालिका अनुहार को सबै कुनै ऊर्जा सानो पात भन्ने तथ्यलाई कारण छ. थप, भर्खरै एकल हुनुको त्यहाँ प्रभावित कुनै एक छ र उनको खुट्टा कपाल या छैन भने बालिका कम परवाह सक्छ.
4. एक माध्यम जान्छ “floozy” चरण
यो चरण केटीलाई केटी निर्भर हुन्छ र पनि सम्बन्ध चली लामो निर्भर. तर यो कुनै कुरा भन्न सुरक्षित छ के, हरेक केटी केही तरिका वा अर्को मा यस मंच को माध्यम जान्छ. चाहे यो एक धेरै पेय भएको छ, सेक्सटिङ, वा धेरै मान्छे संग अनुकूल रही.
5. आत्म-खोज माध्यम आफु Reinvents र नयाँ कुराहरू प्रयास
आत्म-मदत पुस्तकहरू देखि योग चलचित्रहरू र पुस्तकहरू प्रेरणादायक गर्न, हरेक केटी आफु बदलन प्रयास. यो मात्र होइन शोक प्रक्रिया मदत गर्छ तर यो एक प्रस्ट्याउने क्षण जहाँ बालिका छ रूपमा यो सान्त्वना तोड-अप चक्र मा धेरै महत्त्वपूर्ण छ “फेला” आफु.
प्रेम दुखाइ गर्दा, यो प्रेम पनि तपाईं बलियो बनाउँछ भनेर सम्झनु महत्त्वपूर्ण छ.
5 तपाईं पहिलो तिथि मा सोध्नुपर्छ प्रश्न